Boosaaso: Qoysas soo barakacay oo dhibaato ku qaba lacago looga qaado isticmaalka suuliyaal kiro ah - Radio Ergo
Ruqiyo iyo wiilkeeda oo fadhiya iridka gurigeeda/Maxamed Maxamuud Madani/Ergo
(ERGO) – Qoyska Ruqiyo Maxamed Sheekh Xasan oo daggan xerada dadka soo barakacay ee Farjanno ee magaalada Boosaaso ayaa dhibaato ku qaba lacag looga qaado isticmaalka suuli wadareedyo kiro ah oo xerada dhexdeeda ah oo ay lee yihiin dad deegaanka ah, kuwaas qofka ku xaajoonaya halkii marba laga qaado shan kun oo shilin Soomaali ah.
Qoyska ruqiyo oo dhaqaalo xumo ay soo wajahday ayaa markii ay awoodi waayeen lacagta suuliyada waxa ay ku qasbanaadeen in deyn ay raadsadaan. qofka ku xaajoonaya waxaa halkii marba laga qaado shan kun oo shilin Soomaali ah.
Ruqiyo ayaa sheegtay in helitaanka nolol maalmeedka uu xilligan ku adagyahay kadib markii uu labo bil ka hor shaqa la’aan noqday odaygeeda oo ah xamaali dhagaxa dhismaha ka shaqeeya, Sidoo kalana uu horraantii bishan ka burburay ganacsi yar oo ahaa qudaar ay ku iibiso iridka gurigeeda, kadib markii ay qaaliyowday qudaartu bilahan jilaalka ah, ayna awoodi weyday in ay soo iibsato mar kale.
Lacagta hadda ay ku galaan suuliga ayey sheegtay inuu soo deynsado odaygeeda, mararka qaarna ay saaxiibadiis ku caawiyaan. siddeed qof oo qoyskeeda ah ayey xustay in maalinkii laga qaado afartan kun oo shilin Soomaali ah, una dhiganta $1, marka uu qofkiiba halmar isticmalo maalinkii, balse lacagta ayaa intaas ka badata waxeyna ku xirantahay inta jeer ee ay ku noqnoqdaan suuliga. Qubeyska ayey sheegtay in ay joojiyeen si aysan ugu sii badan lacagta suuliga.
Wali waxa ay ku qasban yihiin in ay iibsadaan biyaha ay cabitaanka iyo cunno karinta u isticmaalaan, waxeyna Ruqiyo sheegtay in lix iyo toban kun oo shilin oo ah $0.40 ay maalinkii ku soo iibsadaan afar jiirkaan oo labaatan qaad ah.
“Walaahi deynaa iskaga sii bixinaa. mararka qarkood daasadaa ciyaalka isaga dhiganaa waxaan dhahnaa ordaha iskaga saxaroodoo badda iska geeya sababtoo ah awood ayaan u weynay.”
Ruqiyo ayaa ka walaacsan ilaa iyo inta ay sii heli karaan deynta iyo caawimaadda uu seygeedu uu ka helo saaxiibadiis. Iyadoo hadda lagu lee yahay deyn gaareysa $30. Waxa ay tilmaantay in qoyskeeda oo ka kooban 15 qof ay noloshoodu ku tiirsantahay raashiin uu mar-mar u soo deynsado odaygeeda iyo qaxwe ay ku iibiso gurigeeda hortiisa oo maalinkii ay ka hesho wax ka yar $1. Xaaladan ayaana sababtay in 24-kii saacba ay labo mar karsadaan raashiin aan ku filneyn, halka markii hore ay saddexda waqti heli jireen cunno ku filan sida ay sheegtay.
“Bunkasaan iska xirxirtaa. nus doolar iyo todobaatan iyo shan Cent ka badan kama helo, dhibaato wayn baa na haysa waxna ma haysanno.”
Dhaqaale xumida soo wajahday ayaa sababtay in waxbarasho la’aan ay noqdaan siddeed caruur ah oo ay dhashay, kuwaas oo labo bil ka hor waxbarashada ka haray kadib markii ay awoodi wayday lacag $21 ah oo ay bishii uga bixin jirtay dugsi Qu’aan ay dhigan jireen.
“Meel walba waa ka soo cakirantay. ciyaalkii shalay waxbarasho ii jiray guryahey noo wada fadhiyaan.”
Qoyska ruqiyo oo xeradan ku nool tan iyo sanadkii 2002 markaas oo ay Muqdisho uga soo barakaceen xaalad amni ayaa sidoo kale bil walba laga qaadaa $5 oo ah kirada dhulka ay degantahay oo ay leeyihiin dad deegaanka ah.
Qoysaska xeradan ku nool oo tiradoodu gaareyso siddeed boqol oo qoys ayaa dhulka ku degan heshiis dhexmaray iyaga iyo dadka dhulka leh, waxaana heshiiskaas qeyb ka ahaa in aysan qodan karin suuli, balse ay suuliyaashu ahaadaan kuwo kooban oo kiro ah.
Suuliyada la kireeyo ayaa ah labaatan sida ay sheegtay Arda Cabdullaahi Muuse oo ah gudoomiyaha xeradan oo qudheedu ah dadka soo barakacay ee halkan ku nool ku dhowaad soddon sano. Arda ayaa sheegtay in ay ku qasbanaayeen in ay aqbalaan heshiiskan, madaama sida ay sheegtay ay ku adagtahay in ay helaan dhul ay lacag la’aan ku degaan oo magaalada dhexdeeda ah.
“Dhib badan bay ku qabaan dadku, hadana waan ku qasbanahay oo ma heleyno dhul nagu haboon oo aan degno. waxaan baaq u diri lahaa dowladda inay dhulal ay iyagu leeyihiin noo helaan.”
Agaasimaha waaxda arimaha bulshada magaalada Boosaso Cali Axmed oo aan weydiinay waxa uga qorsheysan qoysaska soo barakacay ee marxaladan wajahayaha ayaa sheegay in dowladdu ka warqabtay caqabadaha dhulka ka haysta qoysaska barakaca ah, hasa yeeshee aysan u heli karin dhul dowladeed oo magaalada dhexdeeda ah oo boqolaal qoys la dajin karo.
Waxa uu xusay in hadda uu heer dhexe marayo qorshe xal waare ah oo qoysaskan lagu dajinayo dhul dowladdu leedahay oo cirifka bari ee magaalada ku yaalla, kaas oo hadda looga dhisayo guryo degaan ah oo la dhameystiri doono dhammaadka sanadkan.
“Xaafad layiraahdo Gerible ayaa laga dhisay illaa labo boqol oo guri, hadana waxaa laga wadaa boqol guri. siddeetan guri oo kalana hadaa larabaa in laga dhiso.”
Waxaa jira xeryo ku yaalla dhul ay dowladdu leedahay oo duleedka magaalada ah, kuwaas oo aan kiro laga qaadin qoysaska dagan. balse fogaanshaha dhulkaas ayey qoys badan ka doorbidayaan xeryaha magaalada ku dhexyaala si ay ugu fududaato in ay ka xoogsadaan magaalada.